उबुन्टु दालचिनी रीमिक्सको पहिले नै एक वेबसाइट छ। अप्रिलमा अनौपचारिक संस्करण | Ubunlog
उबुन्टु दालचिनी रीमिक्सको पहिले नै एक वेबसाइट छ। अप्रिलमा एक अनौपचारिक संस्करण हुनेछ
हाल र उबन्टु जीनोम बन्द गरे पछि उबन्टु परिवारसँग official आधिकारिक स्वादहरू छन्। हालसालैका वर्षहरूमा त्यहाँ भित्र र बहिष्कार भए, जस्तै २०१ 8 मा उबन्टु मेटको आगमन र २०१ 2015 मा उबन्टु बडगी र उबन्टु १N.१० को मुख्य स्वादको प्रसिद्ध ग्राफिकल वातावरणमा फर्किए पछि उबन्टु जीनोम परियोजनाको माथि उल्लिखित अन्त। यदि कुनै अनौंठो कुरा हुँदैन भने, "चाँडै" हामीसँग नवौं स्वाद हुनेछ, दालचिनी स्वाद जसको प्रोजेक्ट आज चिनिन्छ उबुन्टु दालचिनी रीमिक्स.
हामीले फेला परेको र हामी जानकारी दिन्छौं यस सम्भावनाबाट त्यहाँ उबन्टु दालचिनीको बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आएका छन्। पहिलो त्यहाँ एक हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा थियो अप्रिल २०२० मा स्थिर रिलीज। पछि, परियोजना नेताले हामीलाई केहि स्क्रीनशटहरू देखाए (यहाँ) र हामीलाई प्याकेजहरू दिनुभयो जुन तपाईंले तयारी गरिरहनु भएको प्रणालीको थिमको परीक्षण गर्न (यहाँ)। हालसालै एक ISO छवि जारी गरेको छ यसले हामीलाई उबुन्टु दालचीनी कसरी हुन्छ भनेर एक विचार प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ, तर केहि महत्त्वपूर्ण चीज अझै हराइरहेको थियो जुन केहि घण्टाको लागि उपलब्ध छ।
के तपाइँ उबुन्टु दालचिनी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ? संस्करणले हामीलाई उनीहरूले के काम गरिरहेको छ भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ अब उपलब्ध छ
उबंटु दालचिनी रीमिक्स अप्रिलमा स्थिर संस्करण जारी गर्न
माथिका सबै साथ भयो वेब पृष्ठ रोक्नुहोस्, कि यो हामी प्रवेश गर्न सक्दछौं तर यो निर्माणाधीन थियो। केहि घण्टाको लागि, यदि हामी पृष्ठ पहुँच गर्छौं ubuntucinnamon.org हामी देख्न सक्छौं कि यो अपरेसनल छ। एक सानो विवरण र हामी यो बिहान प्रकाशित ट्वीटमा बुझ्छौं बाट, वेब WordPress मा आधारित छ:
हामी अब हाम्रो वेबसाइटको जारी घोषणा गर्न पाउँदा खुसी हुन चाहन्छौं, https://t.co/6Sj9mWNwZr! सबैलाई धन्यवाद Ord वर्डप्रेस त्यसले सहयोग पुर्‍यायो। यदि तपाइँसँग कुनै सल्लाह छ भने कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोस्।
- उबुन्टु दालचिनी रीमिक्स (@ उबुंटु सिन्निमोन) नोभेम्बर 7, 2019
अब हामी हाम्रो वेबसाइट, http://ubuntucinnamon.org को शुभारंभको घोषणा गर्न चाहन्छौं! @WordPress मा सबैलाई धन्यवाद छ जसले सहयोग गर्नुभयो। यदि तपाईंसँग केहि सुझाव छ भने कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोस्।
एकपटक भित्र, हामी जे हेर्छौं उब्बन्टु स्वादहरू जस्तै लुबन्टु, कुबन्टु वा जुबन्टु जस्ता वेब पृष्ठ हो, तर यसले पहिले स्थिर संस्करणको रिलीज हुनुभन्दा पहिले नै ट्वीक्स प्राप्त गर्नेछ। जब तिनीहरूले हामीलाई उन्नत गरे, यो स्थिर संस्करण अप्रिल २०२० मा आउँछ, तर अझै आधिकारिक परिवारको हिस्सा हुनेछैन। यदि तपाई उबुन्टु दालचिनी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले यसको आईएसओ छवि सम्बन्धित लेखबाट भर्चुअल मेसिनको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » डेस्क » अन्य डेस्क » उबुन्टु दालचिनी रीमिक्सको पहिले नै एक वेबसाइट छ। अप्रिलमा एक अनौपचारिक संस्करण हुनेछ
थिम र डिस्ट्रोको आइकनहरू धेरै धेरै न्यूमिक्स जस्तो देखिन्छन्
यो "वेबसाइट" होइन तर "वेबसाइट" हो। एक वेबसाइटले बहु पृष्ठहरू समावेश गर्न सक्दछ।
वेबमीन, उबन्टु १.18.04.०XNUMX मा आधिकारिक भण्डारबाट स्थापना
फायरफक्सले सूचना स्प्याम रोक्न कदम चाल्दै छ